विज्ञानले नेताको दिमाग परिवर्तन गर्ने औषधि बनाइदिए हुन्थ्यो - Birat Sandesh
शनिबार, आश्विन ११, २०७६ मा प्रकाशित
सल्लाहकार, गैरआवासीय नेपाल संघ, तिरोल, अष्ट्रिया
विगत दुई दशकदेखि अष्ट्रियको सुन्दर सहर इन्सवर्कमा बस्छन् दिलकुमार घमाल । उनी गैरआवासीय नेपाली संघ तिरोल अष्ट्रियाका सल्लाहकारसमेत हुन् । रेष्टुरेन्ट व्यवसायसँगै समाजसेवामा समेत सक्रिय छन् घमाल । नेपालबाट खाली हात गएका घमाल अहिले इन्सवर्कको प्रतिष्ठित रेष्टुरेन्ट व्यवसायीका रूपमा गनिन्छन् । इमान्दारिता, मेहनत र आत्मविश्वासकै कारण आफू आजको अवस्थामा आइपुगेको बताउने घमाल नेपालको विकास नभएकोमा भने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमताकै कारण देशको विकास नभएको उनको दाबी छ । देशको विकासका लागि नेतृत्वसँग स्पष्ट भिजन, इच्छाशक्ति र इमान्दारिता हुनुपर्ने घमालको कथन छ । पोखरा जन्मथलो भएका दिलकुमार श्रीमती सोमत, १७ वर्षीय छोरा लेओनकुमार र २० महिनाकी छोरी दिवानीका साथ इन्सवर्कमा बस्छन् । रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा छुट्टै पहिचान बनाइसकेका घमालसँग समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार :
विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि देशको सम्झना नआउने नेपाली सायदै होलान् । जहाँ पुगे पनि मातृभूमिको मायाले सताउँदो रहेछ । आफ्नो श्रम र मेहनतले विदेशमा जतिसुकै सुख र आनन्दको जीवन व्यतीत गरे पनि नेपाली जनताले भोग्नु परेको पीडाले मनै चसक्क दुःख्छ । नेपालमा थुप्रै आन्दोलनहरू भए । आन्दोलनकै बलमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । पञ्चायत हुँदै राजतन्त्रलाई समेत नेपाली जनताले फ्याले । आखिर आन्दोलनबाट नेपाली जनताले के पाए ? अब आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूमाथि प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा भाषणले मात्रै पूरा हुँदैन । काम गर्नुपर्छ । उडन्ते गफले नेपालको विकास हुन सक्दैन । आज झण्डै ५० लाख युवा विदेशमा छन् । अलिकति पढेलेखेका र हातमा सीप भएका युवाहरू देशमा बस्न चाहँदैनन् । युवा नभएको देश कस्तो होला । देश बनाउने बलियो पाखुरीले आज अरुको देश बनाइरहेका छन् । हामी जहाँसुकै भए पनि देशको अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं ।
आफ्नो मातृभूमिलाई माया नगर्ने को होला र ? हामी रहरले भन्दा पनि बाध्यताले विदेशमा छौं । देशको अवस्था राम्रो भइदिएको भए को चाहिं अरुको देशमा बस्न चाहन्छ र ? नेपालमा सरकारी कार्यालयबाट सानोभन्दा साना काम गराउन पनि सोर्स चाहिन्छ । नेताकै मान्छे हुनुपर्छ । घुस खुवाउनुपर्छ । नेताको चाकडी गर्नुपर्छ । सिस्टम छैन । अनि त्यस्तो देशमा बसेर के गर्नु ? जति पनि विदेशमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ धेरैजसो बाध्यताले नै बसेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । तर, जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि देशको माया चाहिं लाग्छ नै ।
राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता नै हो । धेरै टाढा जानु पर्दैन्, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसियाले ३०–४० वर्षमा कति विकास गरिसके । हामीले पञ्चायत फ्यालेको ३० वर्ष पुगिसक्यो । लु पञ्चायतमा विकास भएन । त्यसपछि त नेताहरूकै हातमा छ देश । अनि पञ्चायत फ्यालेपछि पनि राजातन्त्रका कारण देशको विकास भएन भनियो । अब त राजा पनि छैनन् । अब कसलाई दोष दिने ? सबै नेताहरूले नै देश बिगारेका हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ । पार्टीभित्र सबै नेता खराब छन् भन्ने होइन । तर, जो नेतृत्वमा छ उसभित्र लोभ र देश बनाउने इच्छाशक्ति छैन भने कसको के लाग्छ र ? विश्वकै सुन्दर देश हो नेपाल । विद्युत निकाल्यो भने पैसै आउँछ । पर्यटकलाई भित्र्यायो भने पैसै आउँछ । पर्यटन र ऊर्जामा मात्रै राम्ररी विकास गर्ने हो भने धेरै त भन्दिन एक दशकमै मुलुक समृद्धि हुन्छ । तर, नेताहरू जनतालाई आश्वासन बाँडिरहेका छन् । जनता पनि आश्वासन पाएपछि मख्ख हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली हावाबाट बिजुली निकाल्न र पानीजहाज अनि रेलको कुरा गरिरहेका छन् । ए बाबा ! नेपालमा पानीजहाज किन आवश्यक प¥यो । रेल किन आवश्यक प¥यो त्यति सानो मुलुकमा । पहिला गरिबी र भोकमरीले आक्रान्त भएका जनतालाई पेटभरि खाने व्यवस्था मिलाउनु नि । अनि रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु नि । किन हावादारी गफ गरेको होला भन्ने लाग्छ मलाई । जनता पनि त्यसैमा मख्ख छन् । कम्तिमा नेतालाई प्रश्न गर्नुप¥यो कि ट्रयाक पनि पानीजहाज ल्याएर कहाँ कुदाउँछौ ? नदी र खोलाको पानी बगेर गइरहेको छ हावाबाट किन बिजुली निकाल्नु प¥यो । बगेर गएको पानीबाटै निकाल भन्न सक्नुपर्छ जनताले ।
अन्य युवाहरूजस्तै म पनि नेपालमा भविष्य नदेखेर करिब दुई दशकअघि यहाँ आएको हुँ । हुन त दुईपटक जर्मनी पनि आएको थिएँ । घुम्दै यहाँ आएपछि मलाई त यो ठाउँले मोहनी नै लगायो । नेपाल र अष्ट्रियाको भूवनोट झण्डैझण्डै उस्तै नै हो । यो पनि भूपरिवेष्ठित देश हो । तर, यहाँ सिस्टम छ । अनुशासन छ । सरकारले जनताको पीडालाई बुझ्छ । लगानीको वातावरण छ । मेहनत गर्नेलाई धेरै राम्रो छ । कहिलेकाहीं सोच्छु यो देशजस्तै नेपाल कहिले होला भनेर ? चिन्ता त लागिहाल्छ नि देश सम्झिँदा ।
युरोपमा बसेर लामो अनुभव बटुल्नु भएको छ । के गर्यो भने देश बन्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
युरोप होस् चाहे अमेरिका मान्छेले नै बनाएका हुन् । कुनै अर्को ग्रहबाट आएर विकास गरेका होइनन् । यहींका नेता र जनता मिलेर बनाएका हुन् । कम्तीमा एउटा पुस्ताले त्याग गर्नुपर्छ देश बनाउन । तर, नेपालमा कसले त्याग गर्ने ? केपी ओलीको को छ र भ्रष्टाचार गर्ने अनि पैसा कमाउने । उनीले साँच्चै इमान्दार भएर लागेको भए देश बनाउन सक्थे । अहिले दुई तिहाईको सरकार पनि छ । यति शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि देश बन्ने लक्षण देखिएको छैन । बरु झनै भ्रष्टाचार, व्यापार घाटा, विकृति, विसंगति, बेरोजगारी समस्या बढेर गएको छ । कहिलेकाहीं विज्ञानकै कारण मान्छेले चन्द्रमामा टेकिसक्यो । कस्तोकस्तो प्रविधिको विकास गरिसक्यो । यो विज्ञानले हाम्रा नेताहरूको दिमाग परिवर्तन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थालेको छ । हुन त यो सम्भव छैन । औषधि खाएर बिरामी निको भए जस्तै कुनै औषधि बनोस् र नेतालाई खुवाएपछि उसको मनमा चाहिं देशको विकासबाहेक केही नहोस् । देश बनाउनेतिर मात्रै ध्यान जाओस् । त्यस्तो औषधि त नबन्ला । तर, म कामना गर्छु हाम्रो नेताको बुद्धि पलाउने औषधि बनोस् । देश बनाउन धेरै केही गर्नुपर्दैन । नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिले स्वार्थलाई त्याग्नुपर्छ । भएका ऐन कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । देशलाई सिस्टमले चलाउनुपर्छ । शक्तिमा भएको बेला आफन्त, नातागोतालाई भर्ति गर्नुहुँदैन । तर, नेपालमा आफू मन्त्री भयो भने भाइ, भतिज, सालोलाई पीएमा राख्ने गरेको छ । अनि नेतृत्वसँग स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि फ्याल्नुपर्छ ।
इन्सवर्कमा प्रतिष्ठित व्यवसायीका रूपमा दुई दशकदेखि बसिरहँदा आफूलाई सन्तुष्ट भएको महसुस गर्नुभएको छ ?
मान्छे सन्तुष्ट त कहीं पनि हुन सक्दैन । तर, म भन्छु मान्छे जहाँ जुन अवस्थामा छ सन्तुष्ट हुनुपर्छ । रमाउन जान्नुपर्छ । अभाव र दुःखमा पनि हाँस्न सिक्नुपर्छ अनि मान्छे खुसी हुन्छ । म आफूलाई सन्तुष्ट नै पाउँछु । सेन्सी सुशी बार एण्ड रेष्टुरेन्ट र जयपुर गरी इन्सवर्कमा दुईवटा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेको छु । दुवै जापानीज रेष्टुरेन्ट हुन् । दुवै रेष्टुरेन्ट सन् २०११ देखि लगातार अष्ट्रियाको उत्कृष्टमा पर्दै आएका छन् । अष्ट्रियामा उच्च तहका १ लाखभन्दा बढी रेष्टुरेन्ट छन् । १ लाखमध्ये हरेक वर्ष १६ हजार रेष्टरेन्टको गुणस्तरीयता, प्रदान गर्दै आएको सेवासुविधा, नमुना, सरसफाईलगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये २ सय ६७ वटा उत्कृष्ट रेष्टुरेन्ट छनौट गरिन्छ । दुवै रेष्टुरेन्ट हरेक वर्ष उत्कृष्टमा पर्ने गरेका छन् । उत्कृष्ट भएबापत अवार्डसमेत प्रदान गरिँदै आएको छ । मेरा रेष्टुरेन्ट इन्सवर्कको मुटुमा अवस्थित छ । यो ठाउँ पाउनु नै मेराका लागि ठूलो कुरा हो । यो ठाउँ पाउन यहाँका स्थानीय व्यवसायीसमेत मरिहत्ते गर्छन् । यो नेपालको ठमेल जस्तै हो । जहाँ विश्वका पर्यटकहरू आउने गरेका छन् । रेष्टुरेन्टबाट मात्रै वार्षिक अष्ट्रिया सरकारलाई ७ करोड नेपाली रूपैयाँभन्दा बढी बराबर कर तिर्छु । यो अवस्था त्यतिकै सिर्जना भएको होइन । मैले धेरै नै मेहनत र संघर्ष गरेको छु । जीवनलाई सफल बनाउन फेरि पनि भन्छु मेहनत, इमान्दारिता, जिम्मेवारीबोध र आत्मविश्वास हुनुपर्छ । यी कुराहरूले असन्तुष्टिलाई पनि पुर्दै लान्छ ।